Kufuneka-Jonga iiFilimu ezifakwe kwisiXeko saseNew York
I-15 yeeFilimu eziPhambili eziseNew York City
I-Big Apple iyinkwenkwezi ye-Movie, ixesha kunye kwakhona
I sixeko saseNew York yindawo enesimboli, akumangalisi ukuba iifilimu ezingenakubalwa ziye zakhetha isixeko njengendawo efanelekileyo. Ngeendawo eziphakamileyo zokuphakama, iipaki eziluhlaza, nezitrato ezihambelana nomlando, isixeko siyaba ngumlingiswa ngaphakathi.
Khangela iifilimi ezilishumi elinesihlanu ezikhethiweyo ezibonisa i-NYC kuyo yonke inkazimulo yayo, ngokukhawuleza.
Ukutya kwasekuseni eTiffany (1961)
Nge-Getty Images / uJohn Kobal Foundation.
UBlake Edwards ubhekise leli bali, elisekelwe ngokukhululekile kwiveli kaTuman Capote yegama elinye. U-Audrey Hepburn unikela enye yeyona ndlela ephezulu kunye neyona ndlela ebonakalayo yezobugcisa bakhe njengoHolly Golightly, u-naïve, udidi lwentlalo eluntwini oluthandana nomlobi omncinci ohamba esakhiweni sakhe saseNYC. Uthando lwabo lusongelwa, nangona kunjalo, nguHolly odlulileyo-usebenze njengendlela ephakamileyo yokuphambana nomzamo wokuhlalisa indoda eyityebi, indoda endala.
Ininzi yezenzo zenzeka kwi-Tiffany & Co. esitolo esityebileyo kwiFifth Avenue. Zonke izibhengezo zangaphandle zifakwe kwindawo e-New York, ngelixa iifudu zangaphakathi zifakwe ngaphakathi kwiParamount Studios eHollywood, eCalifornia.
Emva kokuba uJosh oneminyaka engama-12 ubudala, wenza isifiso kumatshini wokugcoba i-fortune machine, uyazivakala ngokumangalisayo emzimbeni womntu omdala okhulile (Tom Hanks). UJosh ushiya ukhuseleko ekhaya lakhe kwidolophu yaseNew Jersey ebalekela kwisixeko saseNew York, apho ehlala evuya njengomntwana kuzo zonke izinto ezikhulile.
Esinye seziqendu ezidumileyo kule filimu zenzeka ngaphakathi kwendawo yokugcina i-mega-toy i-FAO Schwarz kwi-Fifth Avenue. Uyakwazi ukubukela indawo ephambili ye-FAO Schwartz ipayiliyano apha, kwi-YouTube. Ezinye indawo zaziquka i-JFK Airport, iSt. James Hotel kunye neStrip House Grill.
Umsebenzi weNtombazana (1988)
Nge-Getty Images / Sunset Boulevard.
UMelanie Griffin udlala uTess McGill, unobhala onomdla. Xa u-boss wakhe obi (edlalwa nguSigourney Weaver ohlala njalo) eshiya ibhishino lakhe, uzama ukuliba ngokuzenza ngathi umqeshwa wakhe.
UTess uyamenza ikhaya kwiStenen Island, kwaye kukho imibala emininzi ekhwele isikebhe ukuya eManhattan. I-Statue of Liberty iboniswa kaninzi kwi-movie. Izikhundla zeofisi zifakwe kwi-State Street Plaza kunye ne-7 yeZiko lezorhwebo, indawo eyatshatyalaliswa ngexesha lokuhlaselwa ngoSeptemba 11, 2001. I-Twin Towers ibonakala ngokugqithiseleyo kwifilimu.
Xa uHarry Met Sally (1989)
"Ndiya kuba nento ayenayo.". Nge-YouTube
UMlawuli uRob Reiner weklasi yokudibanisa yothando ngumbhalo omnye omkhulu wothando ku-NYC. Ebhalwa nguNora Ephron waseNew York, ifilimu yayifakwe phantse kwisixeko kwaye iquka indawo ezininzi ezikhunjulwayo, kuquka i-Washington Square Park Arch, iGreenwich Village, iLoeb Boathouse (kunye nezinye iindidi ezahlukileyo kwiCentral Park), iMetropolitan Museum Ubugcisa, kunye neHlabathi yePark Plaza.
Mhlawumbi indawo eyaziwayo kakhulu, apho uMig Ryan ebeka enkulu "O" ngenxa yeBilly Crystal ekhwankqisayo, eyenzeka kwiDelicatessen yaseKatz eMpuma. Uyakwazi ukubukela loo ndawo apha kwi-YouTube.
Ebhalwa nguDan Aykroyd noHarold Ramis, nabo babenenkwenkwezi kunye noBill Murray no-Ernie Hudson, le movie yayingomnye weefilimu ezimnandi kakhulu kuma-1980. Kwi-movie, abathathu abaqalayo bepropsychology baqala ishishini ukuba basuse izithambo ezivela kwiindawo ezahlukeneyo eziseNew York.
Nangona ezinye izibhengezo zangaphakathi zifakwe eLos Angeles, i-Big Apple idlala indima ebalulekileyo kwenzo. I-firehouse apho i-Ghostbusters ibeka khona ipulangwe yindawo yokucima umlilo: 8 i-Hook kunye ne-Ladder kwi-14 ye-North Moore Street, kwaye imifanekiso embalwa yadutshulwa kwiThala leNcwadi yaseNew York kwi-Fifth Avenue. IYunivesithi yaseColumbia naseCentral Park nayo ibonisiwe.
Esinye seziqendu ezidumileyo elalifakwe kwilayibrari yilapho uDkt. Venkman (Murray) 'ehlutha khona.' Uyakwazi ukubukela loo ndawo apha kwi-YouTube.
I-Rosemary's Baby (1968)
Nge-Getty Izithombe / © Robert Holmes / Corbis / VCG.
Le ntsikrakra yezobuchopho zengqondo yabhalwa kwaye ilawulwa yi-Roman Polanski, esekelwe kwincwadana engcono kakhulu yokuthengisa. I-movie yafotshwa phantse nakwi-odota yesakhiwo saseDotota eyaziwayo kwi-1 West 72nd Street e-Central Park.
Nangona i-movie iguqula igama lesakhiwo kwi "Bramford," yile isakhiwo esifanayo apho ilungu langaphambili leBeatles, uJohn Lennon, wayehlala khona, kwaye apho wayebethelwa khona ngecala elingasecaleni lendoda ekhuseleyo.
Yintoni enye iNew York kunomdlali onzima oza kwenza nantoni na ukuhlawula umsebenzi omkhulu? Le movie, eneenkwenkwezi uDustin Hoffman kunye noJessica Lang, uxela ibali lomdlali onxibe njengowesifazane ukuze athole umsebenzi kwi-sopop opera. Ifilimu yadutshulwa ngokupheleleyo eNew York, kwaye iphawuleka kakhulu kwiindawo ezidumileyo njengeGumbi leTeksi yaseRashiya.
Ndingum Legend (2007)
UWill Smith udlala yedwa osindayo kwisibetho esabulala ininzi yabantu kwisixeko saseNew York. Abo abazange babulawe batshintshwa baba yizilwanyana ezinjenge-zombie.
Yonke ifilimu yadutshulwa kwindawo kwindawo yaseNew York City. Omnye umzobo, udutshulwa kwiBridge eBrooklyn, uhlawule umveliso we $ 5 yezigidi zeedola. Ezinye iindawo eziphawulekayo ziquka ikhaya lika-11 kwi-Washington Square Park, i-Times Square, iPark Park, i-East River, i-Herald Square, iMetroarch Museum ye-Art, i-Park Avenue kunye ne-USS Inesibindi.
Umshayeli weteksi (1976)
"Ngaba ukhuluma 'kum?". Nge-YouTube
Izinkanyezi zikaRobert De Niro kwi-neo-noir engqondweni yengqondo yaseMartin Scorsese malunga nesigxina esingenasimo sengqondo saseVietnam esisebenza njengomqhubi weeteksi zobusuku kwizitrato ezintle zaseNew York City.
Ukutshitshiswa ngokupheleleyo kwisixeko, akusiyo umbuzo wendawo yeDe Niro yedwa olwayilwa yimfazwe evelele ngexesha le-movie; yiziphi iindawo ezingabonakaliyo .
Ibali leNtshona West (1961)
"Ibali leNtshona West" lixelela iindaba ezingapheliyo zikaTony noMaria, abathandi beenkwenkwezi ezivela kwiinkampu zeNew York City. Ingqungquthela ye-classic "Romeo neJuliet", eyenziwa kumculo wamanje kwisigaba kunye neskrini.
Abancinci ababini abasuka kwiingxabano zeNew York City bawa thandana, kodwa ukuxabana phakathi kwabahlobo babo bahlala kwintlekele. Uninzi lweemifanekiso zadutshulwa kwisitalato esinye: I-68th Street phakathi kweAntsterdam ne-West End Avenue.
AmaMppets athathe iManhattan (1984)
I-Muppets kaJim Henson ayisoze yahlula, kwaye ekuboniwe ukuba bahlolisise amanqaku amaninzi eNew York kukuzonwabisa kakhulu. Kule nkalo epheleleyo, ubude beKermit The Frog kunye nefom yegreyiti yefom yeklasi kunye nokugqiba ukuzama ukuyenza ibe yinkulu kwi-NYC. Bathi bathatha iindidi zabo ngendlela, bezama ukukholisa abavelisi ukuba bafake umboniso wabo.
Kukho iindawo ezinkulu apha, kuquka i-Empire State Building, i-Pulitzer Umthombo, indawo yokudlela yaseSardi, iCherry Hill, iPark Park, kunye ne-Conservatory Water e-Central Park.
"Ukuhaha kulungile." Nge-YouTube
"I-Wall Street" ichaza ibali le-stockbroker (u-Charlie Sheen) ongu-ambitious (u-Charlie Sheen) ophendukela kumashishini ukuze athole inhlonipho yomcebisi wakhe, uGordon Gekko (uMichael Douglas). Uqondise kwaye ubhaliswe ngu-Oliver Stone, ibhayisikobho yatsholwa ngokupheleleyo eNew York, kubandakanywa nesibhozo kwisigxina sangempela seNew York Stock Exchange eyayilunemizuzu engama-45 ukudubula.
Ezinye iindawo eziphawulekayo zibandakanya i-Grand Ballroom ye-Roosevelt Hotel, i-Swanky 21 Club, i-Tavern kwivenkile yokutyela e-Central Park, kunye neNkundla ePhakamileyo yeNkundla yaseNew York. Zonke izibhengezo zeofisi zadutshulwa ngaphakathi kwiiofisi zemali zangempela kwi-222 Broadway eDowntown Manhattan.
Njengamabhayisikobho amaninzi eWowody Allen, iNew York ibonakala ngokugqithiseleyo kule ngxelo yomlobi womabonomtshato oqhawula umtshato othandana nentombazana xa sele ethandana nomfazi wakhe omhle.
Iindawo ziquka iFifth Avenue, i-Solomon R. Guggenheim Museum, iMyuziyamu yaseMelika yeMbali yeNdalo, iBloomingdale, Broadway, Central Park West, i-Hayden Planetarium, iMetropolitan Museum ye-Art, iMyuziyamu ye-Art Modern, i-Queensboro Bridge, i-Dalton School, iDean ne-Deluca, Inc , i-East Side, i-Elaine's Restaurant, i-Empire Diner, i-Village yaseGreenwich, i-John's Pizzeria, i-Lincoln Centre, i-Madison Avenue, i-New York Harbor, i-Park Avenue, i-Riverview Terrace, i-Bookstore yaseRizzoli, iCafe yaseRussia, i-Uptown Racquet Club, i-Whitney Museum yase-American Art. , noZabar.
Yenza Into Efanelekileyo (1989)
Ibali likaSpike Lee lolwahlula ngokobuhlanga phakathi komnini we-pizza waseNtaliyane kummandla omnyama wawumsebenzi owenziwe ngokunyaniseka ngo-1989. I-movie yatshuntswa ngokupheleleyo kwi-Stuyvesant Avenue, phakathi kweTycy Street kunye neLexington Avenue kwiBedford-Stuyvesant yaseBrooklyn. Ininzi yesenzo se-movie esenzeka kwiSal's Famous Pizzeria, ivenkile yokutyela eLexington Avenue.
"Udumo" lulandela ubomi bebafundi abakwishumi elivisayo abaya kwiSikolo esiPhakamileyo seZikolo zobuGcisa eNew York City, (eyaziwa namhlanje njengeLaGuardia High School). Ukususela kwiincwadi zokuphicothwa kwabafundi, abafana bajongana nemiba efana nobungqingili, ukukhipha isisu, ukuzama ukuzibulala, nokungafundi.
Okuthakazelisayo, isikolo sangempela senqabe ukuvumela abenzi befilimu ukuba batshale ngaphandle kweso sakhiwo kuba becinga ukuba ifilimu yayinemifanekiso. Abaqambi befriji endaweni yesitishi esishiywe kwi-46 Street Street. Ingcango yesonto yayisetyenziselwa ukungena kwesikolo esikhulu. Isikolo esiphakamileyo saseHaaren sasisetyenziselwa ukukhwela kwangaphakathi.
Inombolo enkulu yomdaniso yadutshulwa kwi-West 46th Street phakathi kwe-6 ne-7 Avenue. Jonga lo mdlalo odumile apha kwi-YouTube.
Ezinye izenzo zenzeka kwi-Times Square, kwiCentral Park West nakwi-Broadway.
Iona ziFilimu ezizimeleyo ezizimeleyo
Iimifanekiso eziphambili ze-Classic Beach-Surf, Sand, kunye neCinema
Imisebenzi ephezulu ye-10 nge-Rock Stars kwi-Films Feature
Inombolo yeStencil Ibeka 1
Iindlela ezili-17 zokuBamba ukuBhiyoza ukuzalwa kweKholeji
IHajj yeePalgrimage Statistics
Yintoni I-Swamp Pop Music?